FIDINANA TAO AMIN’NY DISTRIKAN’I VOHIBATO – Région Haute Matsiatra
FIDINANA TAO AMIN’NY DISTRIKAN’I VOHIBATO
Nitohy tao amin’ny Distrikan’i Vohibato ny fitetezam-paritra tanterahin’ny Goverinora sy ny OMC.
Toy ny tao Ambalavao dia ny Fandriampahalemana andraisan’ny rehetra anjara sy ny fampandrosoana isitrahan’ny tsirairay no votoatin’ny atrik’asa.
Voakasik’izany ny fametrahana ireo rafitra hitantana ny fampandriam-pahalemana eny ifotony ; ny fametrahana ny Fikambanan Soa Miray Dia, izay hiara-hiasa amin’ireo mpitandro filaminana
Nisy ihany koa ny fanjohiana ireo asa eo ampanatanterahana toy ny Hopitaly manara-penitra aorina ao Alakamisy Intenina izay Tetik’asan’ny Filoham-pirenena, eo ihany koa ny fandraisana ny hetahetam-pampandrosoana avy amin’ireo Tompon’Andraikitra eny Ifotony dia ny Sefo Fokontany sy ny Ben’ny Tanàna.
Natolotra azy ireo ihany koa ny Tambin-karaman’ireo Sefo Fokontany miisa 145 ao anatin’ny Distrikan’i Vohibato.
Novitaina naloa daholo ny tambin-karama rehetra taloha izay tsy voaloa ary nanome toky ireo Sefo Fokontany ny Goverinoram-paritra fa ny fitondram-panajakana ankehitriny dia mitsinjo manokana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay miainga avy any amin’ny Fokontany ka tsy hatao ambanin-javatra.
Vao sambany no nisy fitsidihana sy atrik’asa tahaka izao nataon’ny mpitondra ny Faritra sy ireo Kômandy isan-tokony ao amin’ny OMC ka velom-bolo ny vahoaka sy ireo mpitondra ao amin’ity Distrika ity.
Ny Goverinoram-paritra dia natao hanamora ny fanatanteraka ny asam-pampandrosoana eny amin’ny Distrika sy ny Commune tsirairay ka nanome antoka ireo delegasiona nandray fitenenana fa tsy tokony hatahotra intsony, tsy tokony hisalasala intsony,tsy tokony hifampiandry intsony fa ho sahy, ho vonona handray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay fa izany no antoka hampahomby ny ezaka fampandrosoana rehetra izay hiaraha-manao